မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန (MCRB)မှ အစပြုကာ “မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသော စိုးရိမ်မှုရှိနေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်” ကို KBZMS မှ ထောက်ခံရပ်တည်
KBZMS endorses “Statement by Concerned Businesses Operating in Myanmar” initiated by MCRB
လက်ရှိ မြန်မာပြည်သူများ တွေ့ကြုံနေကြရသော စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖော်ပြထားသည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) မှ အစပြုကာ ထုတ်ပြန်ထားချက်ကို ထောက်ခံရပ်တည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသော နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် KBZMS အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ KBZMS အနေဖြင့် ယခုကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် မှန်ကန်သင့်လျော်သော အာမခံဖြေရှင်းနည်းများကို ဆက်လက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းဖော် စီးပွားဖက်များနှင့် အားပေးသူ Customer များ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကိုလည်း ထိုနည်းဟန်များအတိုင်း သေချာစွာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
KBZMS has joined multinational and Myanmar businesses operating in Myanmar in endorsing the statement initiated by the Myanmar Centre for Responsible Business addressing the business and human rights challenges that Myanmar people are facing.
KBZMS remains committed to providing the right insurance solutions to the people of Myanmar throughout this period. At the same time, we will ensure all our operations are carried out in such manner as to ensure the safety and rights of our employees, business partners and customers.
MCRB ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံ အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို စိုးရိမ်ကြီးစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ၊ ဒေသတွင်းမိတ်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုများမှတဆင့် သိန်းနှင့်ချီသော ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်များစွာ အတွက် ပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးသူများ (suppliers) ၏ ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် အေးချမ်းသာယာမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဓိက စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်မိသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုရက်များတွင် လုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရာ၌ ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေး၊ မြန်မာပြည်သူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန်အတွက် - အစားအစာ နှင့် သောက်ဖွယ်ရာများ သော်လည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု သော်လည်းကောင်း - အခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာပြည်သူများ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်ကိုလည်း လေးစားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် မြန်မာပြည်သူတို့နှင့်အတူ “shared space” တွင်အတူရှိနေပြီး - လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသား ပြောဆိုခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့် - တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး - တို့အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာခြင်း နှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တို့မှ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပါသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာမှု နှင့် သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းမှုတို့သည် တည်ငြိမ်သော စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် တည်ဆောက်ရန် အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
- English version: https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/statement-concerned-businesses.html
- Myanmar version: https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/mm/news/statement-concerned-businesses.html
KBZMS အကြောင်း (About KBZMS)
KBZMS အထွေထွေအာမခံ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ကမ္ဘောဇအထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အာမခံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Mitsui Sumitomo Insurance (MSI) တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ဇွန်လတွင် IKBZ အာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်အမည်ဖြင့်စတင်တည်ထောင် ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် MSI နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ်သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် KBZMS အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
KBZMS General Insurance Company Limited isajoint venture between KBZ GI Holding Company with Japanese insurance giant Mitsui Sumitomo Insurance (MSI). Established in June 2012 under the name of IKBZ Insurance Co. Ltd., the company entered intoajoint venture with MSI and took on the new name of KBZMS General Insurance Co Ltd in November 2019.
Know More About KBZMS
KBZMS and KBZLIFE မှ ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဆုပေးပွဲနှင့် အပ
LP Kickoff Meeting
Bancassurance the Myanmar Way...
Myanmar Insurance Market Survey Press Release
အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူ လုပ်ငန်းရှင်ဆု